UDHR - Oromo, Borana-Arsi-Guji
Universal Declaration of Human Rights - Oromo, Borana-Arsi-Guji
1. Namni kamiyyuu yeroo yakkaan himatamutti, hanga seeraan yakkaa ta'uun isaa itti muramutti, mirga qulqulluu ta'ee ilaalamuu ni qaba. Yeroo yaa'iitti dhiyaatus waan egumsa isaaf wabii darbu hunda ni argata.
2. Namni kamiyyuu waan yakka ta'ee hin lakka'amnetti, sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa addunyaatti, yakkamuu hin danda'u. Kana malees, adaba kan yeroo yakkichi raawwatame muramuu qabu caalaatiin hin adabamu.
1. Namni kamiyyuu biyya isaa keessatti mirga asiif achi adeemuu ni qaba.
2. Namni kamiyyuu biyya kan isaas ta'e kan biraa keesaa gadi ba'ee itti deebi'uuf mirga ni qaba.
1. Namni kamiyyuu biyyoota kan biraa keessatti mirga koolu galtummaa gaafatee argachuu ni qaba.
2. Mirgi kunis waan yakka siyaasaatiin alaa ta'e ykn. waan kaayyoo yookaan hafuura Waldaa Motummootaatiin mormu yoo ta'e hin kennamu.
1. Namni kamiyyuu mirga lammummaa ni qaba.
2. Namni kamiyyuu akkasummaan mirga lammummaa hin dhabu, yookaan mirga lammummaa isaa gedderachuu hin dhabu.
1. Dhiirris, dubartiinis kan umuriin isaanii fudhaaf heeruma ga'e. garaagarummaa sanyii, lammumaa fi amanteetiin utuu addaan hin qoodamin, wal-fuudhanii mirga bultii ijaarachuu ni qabaatu; yeroo wal-fuudhanis ta'ee yeroo wal-hiikanittis mirga qixxee ni qabaatu.
2. Fudhaaf heerumni fedha namoota wal-fuudhan irratti kan hundeeffamu ta'a.
3. Maatiin tokko qaama hawaasummaa ishee xinnoo waan ta'eef, eegumsi hundi hawaasichaa fi mootummaa irraa kennamuu fi qaba.
1. Namni kamiyyuu qofaattis ta'e namoota biraa wajjin ta'uudhaan mirga qabeenya horachuu ni qaba.
2. Namni kamiyyuu seera malee qabeenya isaa dhabuu hin qabu.
1. Namni kamiyyuu mirga nagayaan wal-ga'uu fi nagayaan hiriira ba'u ni qaba.
2. Namni kamiyyuu miseensa walda tokkoo ta'uuf hin dirqisiifamu.
1. Namni kamiyyuu, kallattiidhaanis ta'ee karaa bakka-buutota isaa, hojii mootummaa biyya isaa keessatti qooda fudhachuu ni danda'a.
2. Namni kamiyyuu tajaajilaa uummataa argachuuf mirga ni qaba.
3. Fedhi uummataa bu'uura aangoo mootummaati. Fedhi kunis yeroo filannootti ibsama. Filannoon kunis kan namni marti wal-qixummaadhaan qooda keessatti fudhatu yoo ta'u, sirni sagalee ofii ittiin kennanis dhoksaadhaan ni ta'a.
1. Namni kamiyyuu mirga hojjechuu, hojji filachuu, hojjii keessatti haala mijuu argachuu fi hojii dhabuu irraa egamuu ni qaba.
2. Namni kamiyyuu, utuu addaan hin qoodamin, hojii wal-fakkaatuuf mindaa qixxee argachuuf mirga ni qaba.
3. Namni kamiyyuu gatii hojii isaatiif mindaa isaa fi maatii isaa ga'u argachuu qaba. Kunis kan ulfina namummaa isaaf ga'u ta'e, yoo barbaachises, eegumsa hawaasaa kan biraas argachuu ni danda'a.
4. Namni kamiyyuu dhaabbatoota hojjetootaa uummatee keessatti qooda fudhachuudhaan mirgoota isaa eegsifachuu ni danda'a.
1. Namni kamiyyuu, innis maatiin isaas, fayyaa guutuu argatanii sadarkaa jireenya gaarii akka jiraatanitti, waan nyaata, uffataa, mana, eegumsa fayyaa fi tajaajila hawaasummaa hunda argatanii akka jiraatanitti, akkasumas hojii dhabuu, kunuunsa hawaasummaa dhabuu, dhukuba, kophummaa, dullumaa fi rakkoo jireenyaa adda addaa irraa egamuuf mirga qaba.
2. Haadholii fi daa'iman gargaarsaa fi eegumsa qofaa argachuuf mirga ni qabu; daa'imman hundi, manattis ta'e bakkeedhaa yoo dhalatan, eegumsa hawaasummaa qixxeetti argachuuf mirga ni qabu.
1. Namni kamiyyuu mirga barumsa argachuu ni qaba. Barumsi, yoo xinnaate sadarkaa tokkoffaa fi lammataatti, tola ni kennama. Barumsi sadarkaa tokkoffaa dirqii dha. Barumsi tekinikii fii ogummaa kan biraa sadarkaa lammaftaatti kan kenamu yoo ta'u, kunis kan kennamu akka dandeettii abbaatti ta'a.
2. Barumsi kennamu kan namummaa namaa guddisuu fi kan eegumsa mirgootaa fi bilisummaa ilmoo namaa jabeessu ta'uu qaba. Kana malees, uummattoota addunya gidduutti waliigaltee fi michummaa kan jabbeessu, sanyii fi amantii adda-addaa gidduuti waliigaltee kan uumu, akkasumas hojiiwwan Dhaabbata Waldaa Mootummootaa fi nageenya uummataa kan jabeessu ta'uu qaba.
3. Warri ijoollee, akaakuu barumsaa kan fedhan ijoollee isaaniitiif filachuuf mirga ni qabu.
1. Namni kamiyyuu jireenya aadaa biyyaa keessatti dhorkaa malee qooda fudhachuu ni danda'a; faayidaa aartii fi saayinsii irraas bashannana yookiin gammachuu argachuu ni qaba.
2. Namni kamiyyuu waan ogummaa saayinsii, aartii fi barreessuu ofii isaaf hojjeterraa bu'aan argamu hundi akka eegamuuf mirga ni qaba.
1. Namni kamiyyuu hawaasa namummaan isaa keessatti eegamee gabbatu keessatti itti gaafatamummaas ni qaba.
2. Namni kamiyyuu, mirgootaa fi bilisummaa isaa yeroo hojiitti hiikutti, mirgootii fi bilisummaan isaa kan daangeffamuu danda'u seeraan ta'ee, kunis immoo mirgootaa fi bu'aa namoota biraa kan eegsisu, yookiin immoo bu'aa fi negeenya uummataa kan eegsisu yeroo ta'uu dha.
3. Mirgootii fi bilisummaan kun hojii irra kan oolan kaayyoo fi hafuura Dhaabbata Waldaa Mootummoota kan hin faallessine ta'anii you argaman qofa.